राति पर्दै गर्दा आयो ३ करोड नेपालीलाई खुसीको खबर ! रमेश खरेल प्रहरी महानिरीक्षक हुने पक्का ! अब गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारीको उठिबास हुनेभो ..सेयर गरौ - Hamro Abhiyan
राति पर्दै गर्दा आयो ३ करोड नेपालीलाई खुसीको खबर ! रमेश खरेल प्रहरी महानिरीक्षक हुने पक्का ! अब गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारीको उठिबास हुनेभो ..सेयर गरौ
काठमाडौं, १७ चैत्र । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सेलिब्रेटी प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित डिआईजी रमेश खरेल बढुवा हुने भएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खरेललाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पने मनस्थिति बनाएका छन् ।राति पर्दै गर्दा आयो ३ करोड नेपालीलाई खुसीको खबर ! रमेश खरेल प्रहरी महानिरीक्षक हुने पक्का ! अब गुण्डा गर्दी र भ्र्स्ताचारिको उठिबास हुनेभो ..सेयर गरौ
काठमाडौं, १७ चैत्र । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सेलिब्रेटी प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित डिआईजी रमेश खरेल बढुवा हुने भएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खरेललाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पने मनस्थिति बनाएका छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि खरेलको नाममा सहमत भइसकेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने आफू प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका उम्मेदवारलाई महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव लैजाने बताइसकेका छन् । ओलीले निकटस्थहरुसँग खरेल भावी महानिरीक्षक हुने बताएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । हालका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी २८ चैतमा अनिर्वाय अवकाश पाउँदैछन् । खरेलसँगै डिआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की, धिरु बस्नेतलगायत डिआईजीहरु महानिरीक्षकको दौडमा थिए । काभ्रेका स्थायी बासिन्दा खरेल आगामी ११ महिनाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । उता सशस्त्र प्रहरीमा भने एआईजी पुष्पराम केसी महानिरीक्षक बन्ने भएका छन् । केसीसँगै एआईजीहरु शैलेन्द्र खनाल र नारायणबाबु थापा महानिरीक्षकको दौडमा थिए । केसी नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । सशस्त्र प्रहरीभित्र इमान्दार अधिकृतका रुपमा चिनिने केसी एक व्यवसायी प्रहरी अधिकृत हुन् ।-काठमाडुटुडेबाट
खुल्यो रहस्य ! महरा रिहा हुँदै -अधिवक्ता रेवतिरमण भण्डारी
नेकपा चियापानबारे राजेन्द्र महतोको दु:खेसो : ‘चित्त दुःखेपछि के चिया खान जाने ? चिया…
प्रधानमन्त्रीको सबैलाई प्रश्नः मेरो सरकारले केही पनि गरेन ? (भिडियो)
यस्तो ग’म्भीर आ’रोपमा फसे नेकपा सांसद गुरुङ
अविबाहित महिलाको लागीखुशीको खबर !!!
जनकपुर विमानस्थल प्रकरणमा समयमा नउड्ने बुद्ध एयरलाई चै किन छुट !